ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်ပွားသော ဒေသများ၌ မသန်ရှင်းသောရေကြောင့် မမြင်နိုင်တဲ့ ပိုးမွှားတွေ ပျံ့နှံ့နေသောကြောင့် ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ နှင့် ဗိုက်နာခြင်းစသည့် ကူးစက်မြန် ရောဂါအများဆုံးဖြစ်ပြီး ယင်းဒေသ၌ ကူးစက်မြန်ရောဂါ မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။နေရာတစ်ခု ကွက်ဖြစ်ရာမှ နေရာအနှံ့အပြားသို့ ပြန့်သွားနိုင်တယ်။
အသက်ကြီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သည့် လက်ပြဿနာနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများ
အင်္ကျီကြယ်သီးတပ်ဖို့၊ ပုလင်းအဖုံးဖွင့်ဖို့၊ ဖုန်းအသုံးပြုဖို့၊ ကားမောင်းဖို့ အစရှိတာတွေအတွက် သင့်လက်ကို အသုံးပြုရပါတယ်။ လက်မရှိဘဲ ဘယ်အရာကိုမှ
လုပ်ဖို့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ သင့်လက်တွေက အားပျော့သွားပြီး ကွေးနိုင်ဆန့်နိုင်အားလည်း လျော့နည်းသွားပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ဆေးပညာအယူအဆအရ စွဲလမ်းခြင်းကို ယျေဘူရအားဖြင့် အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ Physical Addiction ဟုခေါ်သော ခန္ခာကိုယ်ရဲ့ အသွေးအသား၊ ဆဲလ်၊အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေက စွဲလမ်းခြင်းနှင့်၊ Psychological Addiction ဟုခေါ်သော စိတ်၏စွဲလမ်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ Physical Addiction ဆိုသည်မှာ ခန္ခာကိုယ်၏ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများသည် ဓာတုဆေးဝါးများ၊ ဆေးရည်များ၊ ဆေးမှုန့်များကို မသုံးရမနေနိုင်အောင် စွဲလမ်းခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီး ဆက်တိုက်သုံးစွဲနေရာမှ တိကနဲရုတ်တရက်ဖြတ်လိုက်လျှင် ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ၏ မူလပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေသောလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောရောဂါများ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ကုသခြင်းများအတွက် အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံကြီးမှ အကောင်းဆုံးသောဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်တာဝန်ယူပါရစေ။
သင်၏မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများသည် နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောရောဂါများအကြောင်း ယခင်ကထက်ပိုမိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်ဟု သင် ထင်မြင်ယူဆပါသလား? သင်အသက်ရှည်ကျန်းမာရန် သင့်နှလုံးကို စောင့်ရှောက်ဖို့၊ နှလုံးစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်သည်ဟု သင်တွေးတောဖူးပါသလား?
Page2of 9Prev123...5...Next